In Ka Badan Ilaa 13 Gobol OO Dalka Hindiya Ah Oo Koronto La'aan Ah - jornalizem
In Ka Badan Ilaa 13 Gobol OO Dalka Hindiya Ah Oo Koronto La'aan Ah
Boqolaal Malyuun oo qof ayaa Koronto la'aan ah maalintii labaad Gobollo ku yaala Waqooyiga iyo Koofurta dalka Hindiya, kadib markii cilado ay soo wajaheen Matooradii dabka siinayay.
Gobolladan laga soo sheegay ee koronto la'aanta ah ayaa qaarkood dadka ay la soo darseen xaalad dhanka noloshooda ah waxaana badankood ay ku xayirmeen deegaanadooda.
Kala badh dadka ku nool Hindiya ayaa Koronto la'aan ah waxaana saamaynta ugu badan ku yeelatay Tareenada oo gebi ahaanba istaagay, Cisbitaalada qaar ayay saamaysay Koronto la'aantaasi, kuwaas oo bukaanadii ku jiray lagala soo baxay.
Magaalooyinka Koronto la'aanta ah ayaa kala ah Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh iyo Rajasthan oo ah Gobollka waqooyi, sidoo kale waqooyiga iyo Galbeedka Hindiya oo kala ah Bengal, Bihar, Orissa iyo Jharkhand oo koofurta ah ayaa iyana koronto la'aan ah.
Laakiin qaar ka tirsan magaalooyinkaasi ayaa si aad ah u saamaysay koronto la'aantu, hase yeeshee waxay isticmaalayaan Shirkado Koronto gaar loo leeyahay.
Ilaa 350 Tareen oo isaga kala gooshi jiray Gobolada Hindiya ayaa istaagay koronto la'aanta awgeed, waana taariikhda markii ugu horaysay oo Koronto la'aan caynkan ah oo kale ay soo wajahdo Gobolada Hindiya.